Wafdiga Dowlada ee jooga Kismaayo | KEYDMEDIA ONLINE
Wafdiga Dowlada ee jooga Kismaayo
Muqdisho (KON) Iyadoo ay soo baxayaan warar sheegaya in garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo ay ku xajiranyihiin wafdiga uu hogaaminayo wasiirka gaashaandhiga ee xukuumada Soomaaliya ayaa arintaasi waxaa siyaabo kala duwan kaga hadlay saraakiisha ciidamada Kenya iyo waliba masuuliyiinta taabaxsan Axmed Madoobe.
Saraakiisha ciidamada Kenya ee ku sugan magaalada Kismaayo ayaa ayaa sheegay in wafdigaan aanan lagu xayirin magaalada isla markaana amaankooda ay sugayaan ciidamada Keny
Sidoo kale saraakiisha Kenya ayaa tilmaamay in wafdigaan ay si nabadgalyo ah ay ku joogaan magaalada wax dhibaato ahna aysan la kulmin.
Dhanka Kale Gen. Fartaag oo taabaxsan hogaamiyaha kooxda Raaskambooni Axmed Madoobe haatana ku doodaya inuu yahay madaxweynaha Jubaland ayaa sheegay in wafdigaas ay ka hor istaageen inay soo galaan magaalada.
Wuxuu sheegay fartaag in ay wali ku suganyihiin wafdigaan garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo, magaaladana aysan u soo gudbi Karin amar la’aan.
Ilaa iyo iminka majirto wax war ah oo ka soo baxay dhanka dowlada oo ku aadan arintaan.